Madax Mareexaan iyo Dhulbahante U Badan OO Xaraashaya Guryo Ay Muqdisho ku Lahaayen, – KHAATUMO NEWS
Waxaa Cakiran o omeel adag maraysa xaalada Magaalada Muqdisho, ee caasimada soomaaliya taaso laga dareemaayo isbadal xoogan oo dhanka amniga ah.
Beesha hawiye ayaa guud ahaan isku balaadhisay Caasimada soomaaliya sidoo kale Ciidamada Beesha hawiye ayaa guud Ahaan jiida isaga soo baxay soona buux dhaafiyay Muqdihso.
Xaalada Amni ee Caasimadda ayaa u muuqata mid luntay waxaana meeshaka baxay nidaamkii dawliga ah waxaana muuqda wajiyo beelaysan iyo cilaad sokeeye.
Madax Xilal ka haysa Xukumadda Farmaajo oo u badan Mareexaan iyo Dhulbahante oo guryo ka iibsaday Xamar islamarkaana uu kamid yahay Taliye Xajaar ayaa biilaabay iibinta iyo xaraashka Hantidii ay ku lahayen Muqdisho.
Xubnahan oo aad uga walwalsan in xaalada muqdishi ka sii darto Ayaa isku diyaariyay in ay hantidooda ka sii meelaystan maadaba xaaladu isku badashay mid waji kale leh.
Beesha Hawiye Ayaa shalay Dagaal culus waxay la gashay oo dhexmaray ciidmado si gaar ah looga keenay Gobolka Gedo oo loogu magac daray Duufaan waxaana ciidankaasi ahaayen kuwo beesha madaxweyne Farmaajo ah.
Ciidamada khaaska Ah ee Duufaan waxay u badalen xaalada mid waji beelaysan ah waxaana durba madaxweyne Farmaajo ka saaray Jiidai ay shalay ka dagalamaayen Cidankii Beesha Mareexaan markii uu dareemay in xaaladu waji kale yeelatay ciidankii sumad kale ka muuqatay.
Previous Post: Daawo:Muqdisho gashay xaalad adag iyo Ciidanka Hawiye xidhay Wadooyin Muhiim ah
Next Post: Deg Deg:Farmaajo Shir La Qaatay Madaxda Hawiye Dawlada ku jira Hordhigayna Labo Qodob,
Bililiqo iyo xatooyo xoolo dadweyne malaha lagama ilbaxo, guryo laga dhistay Naarta Samhariira weeye, bal fiiriya waxaa dad barakacayaal ah ama reer Muqdisho ah ee daadsan meel aan ka fogeyn Villa Somalia, waxay roobka ka galaan la’ , Allow nacasaysanaa ninka kuwaa waxooda cuna oo ubad kaga korsada, wallee aakhiro warbaa jira.
Hawiye wixii said lama haysan karo
Dowlad ayaa nalagu handadaa
Degaankeenaa na deeqa
Nin walba dhulkiisa ha aado
10 sanaa nala dulfadjiyey
Hooyo hoosta igeli aa kadhacayso..kk..ani aa ka iibsan xarwayne xajaar guriga..xoog aan uga qadilaa lakin..kkk